ကျွန်တော် LinkedIn ဗွီဒီယိုနှင့် B2B စီးပွားရေးဒေါ်လာတစ်သန်းမည်သို့တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သနည်း Martech Zone
ဗွီဒီယိုသည်အရေးကြီးဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်း၏နေရာကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ 85% သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ဗွီဒီယိုကိုအသုံးပြုခြင်း။ ကျွန်တော် B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသာကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ဗီဒီယိုစျေးကွက်၏ ၈၈% LinkedIn ကိုပြောင်းလဲနှုန်းကိုတိုးတက်စေရန်ထိရောက်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
B2B လုပ်ငန်းရှင်များသည်ဤအခွင့်အလမ်းကိုအမြတ်ထုတ်ရန်မဟုတ်ပါက၎င်းတို့သည်ပြင်းထန်စွာပျောက်ဆုံးနေသည်။ LinkedIn ဗွီဒီယိုကိုအခြေခံသည့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရန်ပုံငွေမပါဘဲဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်အထိတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။
LinkedIn အတွက်ထိရောက်သောဗွီဒီယိုဖန်တီးခြင်းသည်သာလွန်သည် ဗီဒီယိုအကြံဥာဏ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ LinkedIn ဗီဒီယိုများသည်မှန်ကန်သောပရိသတ်ကိုရောက်ရှိရန်နှင့်တကယ့်သက်ရောက်မှုဖြစ်စေရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းအတွက်အထူးကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
B2B ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် LinkedIn ဗီဒီယိုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရသော (နှင့်ကျွန်ုပ်သိရှိလိုသောအရာ) ဤတွင်ပါ။
ငါ upping မှကျူးလွန် ငါ့ LinkedIn ဗီဒီယိုဂိမ်း လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကဖြစ်သည်။ ငါကုမ္ပဏီပို့စ်များအတွက်ဗီဒီယိုများဖန်တီးနှင့်အတူရောနှောခဲ့ပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ငါ့ထံသို့လုံးဝအသစ်ဖြစ်၏။ LinkedIn ဗီဒီယိုတွေကို whiteboard ရှေ့မှာရှေ့မှာကပ်ပြီးရပ်တည်ပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗဟုသုတကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့လိုတယ်ထင်တယ်။ ငါမဟာဗျူဟာကိုပြောင်းလိုက်ပြီးငါသိပြီးနှစ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အကြောင်းပြောနေတာထက်ပိုပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးဗွီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးရောင်းခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်မည့်အစားကျွန်ုပ်သည်အလေးအနက်ထားရမည် ငါ့ပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုး။ ကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုများ ထပ်မံ၍ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ တသမတ်တည်းတင်ပို့ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်ကိုများစွာကြီးထွားလာသည်။ ယခုသူသည်နောက်လိုက် ၇၀၀၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုမဟာဗျူဟာမဏ္ivိုင် (နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းနည်းရရန်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အားထက်သန်မှု) သည်အသစ်သောတန်ချိန်များစွာဖြင့်ငွေထုတ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြင်ဘက်သို့ထွက်ပြီးကျွန်ုပ်ဘဝအကြောင်းပြောခြင်းအားဖြင့်လူများသည်ကျွန်ုပ်ကိုသိကျွမ်းလာပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဆင်ပြေမည်ဟုထင်လျှင်လက်လှမ်းမီလာကြပြီးအရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကလျှပ်စီးကိုမြန်စေသည်။ ဤ LinkedIn ၏အလားအလာသည်ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့စတင်ဝင်ရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းအချိန်တွင်သူတို့သည်နွေးထွေးသော ဦး ဆောင်မှုကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီသည် LinkedIn မှရရှိသောစာချုပ်များမှဒေါ်လာတစ်သန်းကျော်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးမယ့်စိတ်ကူးရှိတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆီကကျွန်တော်အကူအညီရပေမယ့် ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်ဟာကြီးမားတဲ့ပထမခြေလှမ်းပါ။ အဲဒါကခိုင်မာတဲ့ LinkedIn ဗီဒီယိုမဟာဗျူဟာလိုအပ်ပါတယ်။
LinkedIn ဗီဒီယိုတွေကတော့ပြောပြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမြင်အာရုံပုံပြင်များ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးအကြောင်း။ formats နှစ်ခုစလုံးကကောင်းပေမယ့်ဘလော့ဂ်မှာတင်နိုင်တာထက်သင်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းဗွီဒီယိုထဲမှာအများကြီးပိုဖော်ပြလေ့ရှိတယ်။
ဗွီဒီယို၏တန်ဖိုးသည်သင်အမြင်အာရုံနှင့်အသံဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည့်အရာပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဗီဒီယိုကလူတွေကိုသင့်ကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားနဲ့သင်ပြောဆိုပုံကနေသတင်းအချက်အလက်တွေရနိုင်လို့သင်နဲ့တောင်မှသိလာနိုင်တယ်။ LinkedIn မှာငါဝေမျှထားတဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုသိပြီးသားလို့ခံစားရတယ်လို့လူအများကပြောကြတယ်။
သင်ပြောသူ၏အသံနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုကြားရသည့်အခါတူညီသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုကွဲပြားစွာလက်ခံနိုင်သည်။ Social media သည်စာသားပို့စ်များ၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သော်လည်းဗွီဒီယိုသည် ပို၍ မှန်ကန်သည်ဟုခံစားရသည်။ ဗီဒီယိုသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်လာသည့်“ မီးမောင်းထိုးပြသည့် reel” ကိုလူသားဆန်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ဗီဒီယိုဝေမျှဖို့ပိုနည်းနည်းလေးပိုလိုတယ်၊ နောက်နှစ်ကအိမ်ကနေကလေး ၃ ယောက်နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေတုန်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေဖို့သင်အမှန်တကယ်သင်ယူရမယ်။
အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျင့်သုံးသောတူညီသောအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များသည်လည်းဤနေရာတွင်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ပရိသတ်နှင့် ပတ်သက်၍ မဟာဗျူဟာဖြစ်ရန်လိုသည်၊ လူများကိုဂရုစိုက်ရန်အကြောင်းပြချက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်သောပိုက်ကွန်ချပစ်ခြင်းကိုစဉ်းစားချင်သလောက်များစွာသော ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်, ငါတို့မူကားမမှန်ပါဘူးငါတို့သိကြ၏။ LinkedIn ဗွီဒီယိုဖန်တီးတဲ့အခါပရိသတ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ ဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတာလဲ။ သင်ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာများကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်ထံအမြဲတမ်းညွှန်ကြားသင့်သော်လည်း၊ ရိုက်ကူးနေစဉ်စာသားအတိုင်းသင်ကိုင်တွယ်နေသောသူကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပရိသတ်ကိုစိတ်ထဲထားခြင်းဖြင့် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။
သင်မည်သူနှင့်စကားပြောနေသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်အားတုံ့ပြန်မှုဖြစ်စေမည့်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုလိုအပ်သည်။ သငျသညျကျိန်းသေ resonate မည်မဟုတ်အရာကိုသိ? သင်၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုဖော်ပြချက်။ သင်ကလူကိုပေးရမယ် ဂရုစိုက်ဖို့အကြောင်းပြချက် မင်းကုမ္ပဏီအကြောင်းမပြောခင်မင်းကုမ္ပဏီအကြောင်းပါ။ သင်၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာဖော်ပြထားခြင်းဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်အာရုံစိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်သည် LinkedIn တွင်ဘာအကြောင်းလေ့လာချင်ပါသလဲ။
သတိရပါ - 'ပို့စ်တင်ရန်' ကိုနှိပ်သောအခါပရိသတ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည်မရပ်နိုင်ပါ။ သင်၏ပစ်မှတ်စျေးကွက်နှင့် (စစ်မှန်သောစိတ်ဝင်စားမှုကိုရယူခြင်း) ဖြင့်သင်၏ပရိသတ်ကိုနောက်ကွယ်တွင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်ဖော်ပြထားတဲ့ပစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ကသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုကိုအမှန်တကယ်မြင်တယ်ဆိုတာသေချာစေရန်၊ ၄ င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးဆက်သွယ်မှုဖြစ်ဖို့ကူညီတယ်။ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ့သည်လုပ်ငန်းတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်အလားအလာရှိသောစာရင်းများ ဖန်တီး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကို၎င်းတို့အစာကျွေးခြင်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏရောင်းစရာမလိုဘဲအမြဲသတိရနေကြသည်။
သင်၏ LinkedIn ဗွီဒီယိုမဟာဗျူဟာကိုဖန်တီးခြင်း
သင်၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင် LinkedIn ဗွီဒီယိုကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ ချွေးမမသုံးပါနှင့် စတင်ရန် မင်းထင်တာထက်
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းထိရောက်သော LinkedIn ဗွီဒီယိုကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့သည့်အကြံပြုချက်အချို့မှာ - ရောဂါကူးစက်မှုကာလအတွင်း ၁၀ လဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းအပါအဝင် -
အဲဒါကိုလွန်လွန်စွာမစဉ်းစားပါနှင့်။ ကင်မရာကိုဖွင့်ပြီးရိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီးခြားစီရွေးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုတွေကိုတောင်မကြည့်ဘူး
စာတန်းထိုးထည့်ပါ။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေ (သို့) တခြားသူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတာမျိုး၊ နားထောင်တာထက်စာဖတ်တာပိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုနိုင်မှုအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်လည်းဖြစ်သည်။
ခေါင်းစီးထည့်ပါ။ သင်စာတန်းထိုးများထည့်နေစဉ်၊ သင့်ဗွီဒီယိုတွင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထည့်ပါ
မူရင်းဖြစ်ပါစေ။ ငါဗီဒီယိုစီးရီးတင်ခြင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်ပေမယ့် (ကွဲပြားခြားနားသောခေါင်းစဉ်များနှင့် thumbnails နှင့်အတူ) ပြောအသစ်သောအရာတစ်ခုခုရှိခြင်းအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ္တူနှင့်အတူဖြည့်စွက်။ လူတွေကခင်ဗျားရဲ့ဗွီဒီယိုအပြည့်ကိုကြည့်ချင်မှကြည့်မယ်။ သူတို့ကိုသင်၏စာမူပေါ်တွင်ဆက်နေရန်နှင့်ခိုင်လုံသောမိတ္တူထည့်ခြင်းဖြင့်စေ့စပ်ရန်အကြောင်းပြချက်ပေးပါ။
သင်၏ B2B အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြီးထွားစေရန်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက်သင်သည် LinkedIn ဗီဒီယိုကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်၏မျက်စိပိတ်ပြီးအတွက်ခုန်! သင်ပို့စ်တင်သည်နှင့်ချက်ချင်းတင်ပို့သည်ကိုသင်မယုံတော့ပါ။
LinkedIn တွင်ဂျက်ကီ Hermes နောက်သို့လိုက်ပါ
Tags: b2bb2b ဗီဒီယိုb2b ဗွီဒီယိုမဟာဗျူဟာဂျက်ကီ Hermeslinkedinလိပ်စာနောက်လိုက်linkedin စျေးကွက်linkedin ဗီဒီယိုအဘိုးဗီဒီယိုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြ
ဂျက်ကီ Hermes ၏ CEO ဖြစ်သူ အရှိန်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကူညီပေးသောမီဝါကီးအခြေစိုက်အေဂျင်စီတစ်ခုသည်ဝင်ငွေရရန်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကြီးထွားလာသည်။ အမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုရက်သတ္တပတ်။ အပေါ်အလွန်တက်ကြွ LinkedIn တို့, Jackie နေ့စဉ်ဘဝနှင့် bootstrapped ကုမ္ပဏီကြီးထွားလာ၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်။ ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။ ဂျက်ကီကကျောင်းသားတွေကိုသင်ကြားပေးတယ် အဆိုပါ Commons, တစ် ဦး Co- စည်းရုံးရေးမှူးဖြစ်ပါတယ် Milwaukee မှစတင်ပေါ်ပေါက်သည်နှင့်အတူအကြံပေး ရွှေကောင်းကင်တမန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ။ ဂျက်ကီသည်သူမ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပါ ၀ င်မှုအပြင်မွေးစားမွေးစားပေးသည့်အမေနှင့်အနာဂတ်ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။